Archive du 20191025
Rajoelina – Hajo Hifamingana anatiny
Manomboka mifampiahiahy ireo samy mpomba an’i Andry Rajoelina sy ireo mpanajary ny IEM (Initiative pour l'Emergence de Madagascar).
Mamy Rabenirina "Ara-drariny ny fandavana ny Tanà-masoandro"
Raha nampiato ny tetikasa Tanà-masoandro ny filoham-pirenena dia mbola mitohy hatrany ny fanehoan-kevitra mahakasika izany.
Mponin’Ambohitrimanjaka Manizingizina fa tsy manaiky ny hanotofana ny taniny
Very fanahy mbola velona ny ankamaroan’ireo mponina voakasik’ilay tetikasa tana-masoandro kasain’ny fitondram-panjakana hanotofana tany an’arivony ha ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano.
Rivo Rakotovao “Ny hanambatra ny mpikambana no tanjona amin’io kongresy io”
Hanambatra ireo mpikambana izay tsy nivadika palitao ny tanjon’ny antoko Hvm amin’io kongresy izay ho tanterahin’izy ireo io, amin’ny volana novambara ho avy izao.
Amboteiazy, solika tsy misy, delestazy Hovonoina ve ny mponin’Antananarivo ?
Ekena fa tena ilaina ny fanatsarana sy fanamboarana fotodrafitrasa tahaka ny lalana, tetezana, trano. Tsy lavinna fa mety misy ny tampoka saingy misy kosa angamba ny fandaminana asa tokony hatao fa tsy atao hitsin-dalana fotsiny ilay izy.
Mifanontany tena ny fiarahamonina hoe inona no mba zavatra voafehin’ny fanjakana amin’izao fotoana ?
Salon de l’étudiant-Spécial Tamatave Mandray anjara feno ny IT University
Hotanterahina ao Toamasina anio zoma sy rahampitso sabotsy ny andiany faharoa amin’ny “Salon de l’Etudiant-Spécial Tamatave”, karakarain’ny Madajeune.
Fanatsarana ny fiahiana ny ankizy Manantena ny fampiakarana ny tetibola ny UNICEF
Tsy mitsahatra mitotongana ny taham-pahalalana fototry ny ankizy nahavita ny taona fahadimy ao amin'ny ambaratonga fototra, araka ny tatitra navoakan'ny Tahirin'ny Firenena Mikambana ho an'ny ankizy,
Seranan-tsambon’i Toamasina Ho tonga anio ny solika 56 tapitrisa litatra
Ho tonga ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina anio zoma amin’ny 6 ora maraina ny sambo lehibe mitondra solika.
Olan’ny JIRAMA Tsy fantatra intsony izay tena marina
Tato anaty andro vitsy izay dia hita taratra ny fanapahan-jiro lavareny tamina toerana samihafa teto an-drenivohitra.
Famatsiana herinaratra Ny fampiasana angovo azo havaozina no tena vahaolana
Misitraka herinaratra amin’ny alalan’ny herin’ny masoandro na « système solaire photovoltÏque manana tanjaka 11KWc mitentina 31 000 euros ny Tranoben’ny minisiteran’ny angovo sy ny rano ary ny akoran’afo na ny MEEH eny Ampandrianomby nanomboka omaly.